Drumroll: Porn ပရိသတ်များအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ် (၂၀၁၃) - သင့် ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်
Drumroll: Porn ပရိသတ်များသည်တစ်ဦး Academic ဂျာနယ် (2013)
ညစ်ညမ်းစာနယ်ဇင်းအသစ်တွင် 'အကောင်းမြင်မှုကိုအလေးထား' ရန် Academia ကိုပြင်ဆင်သည်
လူသားတစ်ဦးဖြစ်ရပ်ဆန်းလေးနက်ရည်မှန်းချက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏လိုအပ်ချက်အတွက်အစဉ်အဆက်ရှိခဲ့ပါလျှင်, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုဧကန်အမှန်အကဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါနုပျိုလူ့ဦးနှောက်ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ထိုကဲ့သို့သောအရေးကြီးသည့်ပြတင်းပေါက်စဉ်အတွင်းဤမျှလောက်ခေါ်ဆောင်သွားအသစ်အဆန်းတွေနဲ့ထိခိုက်လျက်ရှိသည်နှင့်အက်ကြောင်းကျိန်းသေပေါ်ထွန်းလျက်ရှိသည်ဘယ်တော့မှမ။ သို့သော်လာမည့်၏ဘုတ်အဖွဲ့အနေဖြင့်တရားစီရငျ porn လေ့လာရေးဂျာနယ်, ဒီအထူးသဖြင့်ထုတ်ဝေဒီအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍဖြည့်ဆည်းရန်အငျးကှာနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအားနည်းနေပါလိမ့်မယ်။
ဖြစ်ခြင်းသောဂျာနယ်, Routledge ထုတ်ဝေသော 2014 အတွက်စတင်ကြိုဆိုပါတယ်ပါလိမ့်မယ် လယ်ကွင်းကနေတင်ပြ criminology, လူမှုဗေဒ, အလုပ်သမားလေ့လာမှုများနှင့်မီဒီယာလေ့လာမှုများကဲ့သို့ကွဲပြားခြားနား။ အဲဒါကိုပြောပြတယ်အဖြစ် New York Times ကိုအဆိုအရ, Porn လေ့လာရေးညစ်ညမ်းအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ် "လိင်, ကျား, မ, လူမျိုး, လူတန်းစား, အသက်နှင့်စွမ်းရည်၏လမ်းဆုံ။ " ဒီကျိန်းသေသည့်ပညာအစုံအဘို့ကို XXX-content တွေကိုဖြစ်ပါတယ်။
အသုံးပြုသူများအပေါ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှု၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အဆိုပြုထားသောခေါင်းစဉ်များစာရင်းတွင်ဘာမှမရှိပါ။ တကယ်တော့၊ ဂျာနယ်သစ်အတွက်ဘုတ်အဖွဲ့ဝင် ၃၂ ဦး လုံးသည် porn ၏အကျိုးကျေးဇူးများသည်၎င်း၏ကုန်ကျစရိတ်ထက်များစွာပိုသည်ဟုထင်ရသည်။
Psexco ဘုတ်အဖွဲ့၏ဥက္ကဌ၊ Nestle နှင့် Pillsbury စီအီးအိုများနှင့် Kraft မှစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအရာရှိတစ် ဦး သာပါဝင်သောအဝလွန်ဒေသရှိ“ Dietetics Studies ဂျာနယ်” ဆိုပါစို့။ လာမည့်ဂျာနယ်၏.
စုစုပေါင်း 23 ဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင် 32 ဂျာနယ်တွင်များအတွက်ပိုကောင်းတဲ့အမည်အားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အကြံပြုသောမီဒီယာနှင့်ရုပ်ရှင်လေ့လာမှုများအတွက်အထူးပြု porn ရုပ်ရှင်ယနေ့တွင်။ အဘယ်သူမျှမဇီဝြဖစ်စဉ်, neuroscience, ဆယ်ကျော်သက်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတသို့မဟုတ်စွဲလမ်းအတွက်ကျယ်ပြန့်နောက်ခံရှိသည်။ အမှန်မှာထို3တစ်ဦးမျှသာ 32 စိတ်ပညာ PhDs ရှိသည်။
ပိုဆိုးသည်မှာယနေ့လူ၏ညစ်ညမ်းစေနိုင်သောပြpornနာများသည်လူကြီးဗီဒီယိုကွန်ယက်၏ချစ်သူ Marty Klein မှလွဲ၍ မည်သူမျှလက်တွေ့အတွေ့အကြုံမရှိသေးပါ။ AVN သည် Klein ကိုဂုဏ်ပြုခဲ့သည် သူ့ကိုယ်ပိုင် porn ကြယ်ပွင့်စာမျက်နှာ ယင်း၏ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြသနိုင်ဖို့။
ဖြစ်သင့်သည်။ ကလိန်းသည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအကြိမ်ကြိမ်အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည် ဥပမာအားဖြင့်, သူ့ post ကိုကြည့်ပါ, ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ awareness week စောင့်ရှောက်ဖို့တိုင်အောင်တဆယ်လေးနည်းလမ်းများ။ ၁၄ အနက်မှတစ်ခုမှာ“ဤအချက်ကိုအလွတ်ကျက်: porn ကိုအသုံးပြုပြီးဦးနှောက်ပျက်စီးခြင်း, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု, ဒါမှမဟုတ်တဦးတည်းရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားအရှုံးဖြစ်ပေါ်စေမထားဘူး။ " ဦးနှောက်ပျက်စီးမှုကိုအနီရောင် herring ဖြစ်ပါတယ် - ပေမယ့် စွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများ reverse မှခေါင်းမာစေနိုင်ပါတယ်။ များသော အသုံးပြုသူ Self-အစီရင်ခံစာများသို့သော်စာရွက်စာတမ်း porn-related ED နှင့် အစစ်အမှန်မိတ်ဖက်ဖို့ဆွဲဆောင်မှုဆုံးရှုံး (အဖြစ် porn အသုံးပြုမှုကိုဖွင့်ပေးခြင်းပြီးနောက်ထိုအလက္ခဏာတွေမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်) ။
ဂျာနယ်အသစ်၏ဘုတ်အဖွဲ့သည်များသောအားဖြင့်အနုပညာရှင်များနှင့်သီအိုရီပညာရှင်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားကြပြီး၊ ဤတွင်ဂျာနယ်အသစ်သည်အယ်ဒီတာများဖြစ်သည့် Smith နှင့် Attwood တို့မှစတင်မည်ဟူသောသတင်းကောင်းကိုတွေ့ရသည်။
Clarissa Smith က - မကြာသေးမီက "ထောက်လှမ်းရေး Squared"ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှု, စမစ်, porn ကိုလိုလားသူဘက်ကိုယ်စားပြု, ထုတ်ပြန်ကြေညာ "အပြာစာပေသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကောင်းသည်။ "
Fiona Attwood နှင့် Clarissa စမစ်၏ Co-စာရေးဆရာများဖြစ်ကြသည် စစ်တမ်းတစ်ခု “ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုသုံးပြီးပျော်မွေ့သူ” များအကြောင်း အိုအားဖြင့်စာနယ်ဇင်းများသည်ဤသို့သောကန့်သတ်ချက်များကို ကျော်လွန်၍ ကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားပြီးစာဖတ်သူများအား“ ညစ်ညမ်းမှုသည်ကြီးလှသည်” ဟုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလေ့လာမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုစာဖတ်သူများအားလမ်းလွဲစေခဲ့သည်။
သြစတြေးလျဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင် Kath Albury, သူတို့ရဲ့သူမ၏ကိုယ်ပိုင်တွေ့နေရတယ်လုပ်ခဲ့တယ် စစ်တမ်း အမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှအချို့သောရန်ပုံငွေကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်ချင်းအလန်မက်ကီနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ဆိုးကျိုးကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်စာရေးသူများအနေဖြင့်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကြည့်ရှုသူများ၏ကျေနပ်အားရမှုကပိုမိုများပြားသည်။s."
အလန် McKee -“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည်သင့်အတွက်နည်းလမ်းများစွာဖြင့်တကယ်ကောင်းပါသည်။ ”
Violet Blue - အပြာရောင်က erotica ကိုမိန်းမရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်နက်ကိရိယာတခုအနေနဲ့သင်စဉ်းစားသင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ၎င်းသည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏တုန်ခါသကဲ့သို့ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်။ (link မပါဝင်ပါ။ NSFW ။ )
Meg Barker - "ကျနော့်ရဲ့သုတေသနအများစုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းများ၌ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊
ထရစ်စ Taormino - ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်များနှင့်မင်းသမီး၊ “ Rough Sex # 2” နှင့်“ House of Ass” ကိုအခြားသူများအကြားဖန်တီးသူ။
ဤအစုအဝေးသည်“ နက်ရှိုင်းသော Fried Banana Splits ၏ဘဝကိုမြှင့်တင်သည့်ရှုထောင့်များ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဖြစ်သောအစားအစာလေ့လာမှုနှင့်ကိုက်ညီသောအငွေ့အသက်များကိုထုတ်ယူနိုင်ရန်မျှော်လင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်? သောကြောင့် porn လေ့လာရေးဂျာနယ် ဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များကအပြုသဘောပေါ်လွင်နှင့်အဟောင်းသီချင်းအကြံပေးရုံကဲ့သို့, အနုတ်လက္ခဏာပပျောက်ဖို့သူတို့ရဲ့မစ်ရှင်စေပြီ။
အဘယ်သူသည် မဟုတ် ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်?
အများကြီးပေမယ့် ဝဘ်ဖြတ်ပြီး porn အသုံးပြုသူများအဝေဖန်ခံရနေကြတယ် of ပြင်းထန်သောရောဂါလက္ခဏာများ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း၏ overconsumption ထံမှအပါအဝင် အစွန်းရောက်ပစ္စည်းမှတင်းမာမှုလျှော့ချ, ဆုတ်ခွာဒုက္ခ, နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ် နှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဂျာနယ်အသစ်၏ရောင်စုံဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များတွင်အမူအကျင့်စွဲအထူးကုသို့မဟုတ်ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာဝန်တစ် ဦး မျှမရှိ။ တကယ်တော့ဒီဘုတ်အဖွဲ့ကငါတို့ခြေထောက်တွေကြားမှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုသိပ်အာရုံစိုက်တာကြောင့်သူတို့နားရွက်ကြားကညစ်ညမ်းသက်ရောက်မှုတွေအတွက်အချက်အလက်စုဆောင်းတာကိုနည်းနည်းပဲအသုံးချလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ New York Times ကို ဂျာနယ်အသစ်ကို၎င်း၏“ Arts” အပိုင်းတွင်ကြေငြာခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ယနေ့အချိန်တွင်အကြီးအကျယ်ပျက်စီးနေသောအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည်ယဉ်ကျေးမှု၊ အမြတ်ထုတ်သောရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်မှု၏အသေးအဖွဲကိစ္စများသို့မဟုတ်မြန်နှုန်းမြင့်မတိုင်မီဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအရာနှင့်သက်ဆိုင်သည်မဟုတ်ပါ။ အကြောင်းပါ ချိုးအသစ်အဆန်းများပေးပို့ နှင့်ဖန်သားပြင် - လိင်မဟုတ်။ အကြောင်းပါ အခမဲ့ porn ပြွန်က်ဘ်ဆိုက်များဆိုလိုသည်မှာမရေမတွက်နိုင်သော Hi-def ဗီဒီယိုများ၏ပေါက်ကွဲစေနိုင်သောအပိုင်းများ၏ ၃ မိနစ်ကလစ်များဖွင့်ထားသော tabs များစွာ။ အကြောင်းပါ တင်းမာမှုလျှော့ချ ပို. ပို. မညီကြောင်း (ရန်အသုံးပြုသူအမြင်၌တည်၏) porn ။
အရေးကြီးဆုံးအချက်ကဒီလိုမျိုးမတူနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေပါ ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်အပေါ်ဦးနှောက်-လေ့ကျင့်ရေးနှင့်ဆက်စပ်ပြဿနာများ။ ဤရွေ့ကား unaccustomed အပါအဝင် လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်, အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်လှုံ့ဆျောမှုပြဿနာများ, ကျယ်ပြန့် နုပျိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများ ကွန်ဒုံးသုံးပြီးနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေနဲ့။
အရာတစ်ခုမှာသေချာဘို့ဖြစ်ပါသည်: အဘယ်သူ၏အယ်ဒီတာများစွဲသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်၏ရောဂါလက္ခဏာများဆက်ဆက်ဖြစ်စေ၏သက်သေအထောက်အထားများကိုရှာဖွေမည်မဟုတ်ဖော်ထုတ်မယ်လို့မေးခွန်းများကိုမမေးပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးကဂျာနယ်။ အမှန်မှာထိုအပေါ်ရှေးရှေးကနေအကြိမ်ကြိမ်ကျနော်တို့ကြားစကားမှတ်ကနေတရားစီရငျ porn လေ့လာရေးဂျာနယ် ဘုတ်အဖွဲ့, သင်သည်ထိုသူတို့အကြီးအကျယ်အောက်ပါအာရုံပြံ့လှငျ့၏မျက်နှာသာအတွက်ရှေ့အပိုဒ်အတွက်မငြိမ်ဖြစ်ရပ်လျစ်လျူရှုရန်မျှော်လင့်ထားနိုင်သည်
porn အများကြီးအပျော်တမ်းဖွငျ့ (သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးကအပျော်တမ်းဖွငျ့ကြောင်းပေါ်လာဖို့လုပ်), ဒါကြောင့်ငါတို့ရှိသမျှသည်ပြွန်-site ကို, gonzo-porn ဖြစ်ရပ်ဆန်းကိုမထီမဲ့မြင်မပြုနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။
မျက်နှာပွင့်လာခြင်းအပေါ်မှီခိုလာခြင်းသည်လူ့ခေါ်ဆောင်သွားသည့်အပြန်အလှန်ပြုမူမှုများကဲ့သို့ပင်“ ကျန်းမာသောလိင်” နည်းတူသာဖြစ်သည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူနည်းစုသာအင်တာနက်ကို porn ကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်လိင်ဆက်ဆံဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ကလေးတွေအဘို့အညစ်ညမ်း access ကိုအရေးကွီး၏။ (သို့သော်, သြစတြီးယားရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူ ဂရေဂို Schmidinger အစောပိုင်းကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုတချို့လိင်တူချစ်သူအသုံးပြုသူများသည်သူတို့တွင်အားနည်းနေစိုက်ထူဖို့ဦးဆောင်နေပါတယ်ရှိမရှိမေးမြန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ )
ဒါခေါ်၏ကျော်ကြားမှုအတွက်မြင့်တက်လာ '' Mummy Porn'ကဲ့သို့သောစာအုပ်များအပါအဝင် Grey ကငါးဆယ် Shades trilogy ပာ, လူသားများအတွက်ရှေ့ဆက်မယ့်ခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။
“ ကောင်းသောညစ်ညမ်းမှု” နှင့်“ ဆိုးညစ်သောညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ” ရှိကြောင်းကလေးငယ်များအားပြောခြင်းသည်လူငယ်ညစ်ညမ်းသူများအတွက်မည်သည့်ပြproblemsနာကိုမဆိုဖယ်ရှားပေးလိမ့်မည်ဟုမာတီကလိန်းကပြောကြားသည်။ ညစ်ညမ်းစာတတ်မြောက်ရေး.
အခြေခံအားဖြင့်ဤဂျာနယ်သည်ကျွန်ုပ်တို့သိထားနှင့်ပြီးသောအကြောင်းအရာများကိုပြောပြရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပုံရသည်။ ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ (အနည်းဆုံးအသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေသောရောဂါလက္ခဏာများမဖြစ်ပေါ်မှီတိုင်အောင်) ။ ” အကယ်၍ ပညာရှင်များကအဖွဲ့များကြားတွင်ပါတီများကိုလေ့လာပြီး“ ဒီမှာဘယ်သူ့ကိုမှဘီယာကြိုက်ကြတာလဲ” ဟုအော်ပါက စုပေါင်းတုန့်ပြန်မှုသည်အလွန်တရာကြီးမားသော“ ငရဲ၊ သို့သော်ထိုသို့သောစစ်တမ်းကအရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ၊
အကယ်၍ သင်ဟာ Routledge (ဂျာနယ်အသစ်ထုတ်ဝေသူ) ကိုပိုမိုရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့ဘုတ်အဖွဲ့တစ်ခုဖွဲ့ခိုင်းချင်ရင်၊ ဒါမှမဟုတ်၊ အခြားအားဖြင့်၊ ဂျာနယ်အသစ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုပိုပြီးတိကျတဲ့အရာအဖြစ်ပြောင်းလိုက်ရင်၊ သင်လက်မှတ်ထိုးနိုင်ပါတယ်။ ဒီအသနားခံစာ.
“ ညစ်ညမ်းမှုနှင့်မတူကွဲပြားသောအမြင်များမှညစ်ညမ်းသောဝေဖန်ဆန်းစစ်မှုများကိုပြုလုပ်ရန် Porn Studies အမည်ရှိဂျာနယ်တစ်စောင်သည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ သင်တို့၏မျှော်လင့်ချက်မှာသင်သည်အယ်ဒီတာအဖွဲ့၏ဖွဲ့စည်းမှုကိုပြောင်းလဲပြီး၊ ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ညစ်ညမ်းသောယဉ်ကျေးမှုတွင်ထည့်သွင်းထားသောပြissuesနာများကိုသောင်းပြောင်းထွေလာဖြစ်စေသည့်စစ်ကြောမေးမြန်းမှုအတွက်ဂျာနယ်၏ကတိက ၀ တ်ကိုအတည်ပြုပြီးကွဲပြားခြားနားသောအမြင်များကိုကိုယ်စားပြုကြောင်းသေချာစေရန် - ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်ထုတ်ဝေသောစာစီစာကုံးတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ဂျာနယ်။ ထိုသို့မအောင်မြင်ပါကသင်၏အယ်ဒီတာ (Pro-Porn Studies) ၏ဘက်လိုက်မှုများကိုထင်ဟပ်ပြသရန်သင်၏အမည်ကိုပြောင်းလဲရန်နှင့်အခြားဂျာနယ်တစ်စောင် (ဥပမာ - Critical Porn Studies) ကိုဖန်တီးပေးရန်တောင်းဆိုပါသည်။ ”
အသစ်ကဂျာနယ်နှင့် ပတ်သက်. ဗြိတိန်ဆောင်းပါး
"porn လေ့လာမှုများပူသည်။ ငါမာဂရက် Wente အားဖြင့်စိတ်ပူမိပါတယ် "
အားလုံးပါမောက္ခကျောင်းသားများကိုကွာတွှေဖို့ surest လမ်း 8 မှာသင်တန်းအချိန်စာရင်းကြောင်းကိုငါသိ၏: နံနက်ယံ၌ 30 ။ ဒါပေမဲ့ Bobby Noble ၏သင်တန်းကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကညစ်ညမ်းဆုံးမဩဝါဒပေး - နဲ့သူ့ York ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများတစ်ဦးလူတန်းစားလွဲချော်ဘူး။ အဘယျသို့နံနက်ယံ၌ porn ထက်ပိုကောင်းလေ့လာဖို့အခွင့်အလမ်းနှင့်အတူပြည့်စုံဖြစ်နိုင်ပါတယ် ထွက် ဒဏ္ဍာရီညစ်ညမ်းဒါရိုက်တာ John Stagliano (ခေါ် Buttman) ၏?
"ငါတို့အဘယ်သူမျှမကကျော်ဖြစ်လိုခဲ့," ပါမောက္ခ Noble Porn လေ့လာရေး, ယခုအပတ်အွန်လိုင်းက၎င်း၏အများကြီး-မျှော်လင့်ပွဲဦးထွက်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့အသစ်စက်စက်ပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ်ထဲမှာရေးသားထားပါတယ်။ ဒါဟာကျော်ကြားတဲ့ကျောင်းက Imprint ထုတ်ဝေသောနှင့်ညစ်ပတ်ပေရေလိင်ဆက်ဆံအခြားလူကိုကြည့်လူများက၎င်း၏တိကျခိုင်မာစွာဝေဖန်ဆန်းစစ်နှင့်အတူတန်ဖိုးရှိသောနယ်ပယ်ဖြည်ဖြစ်ပါတယ်။
Academic ၏ဆင်စွယ်တာဝါတိုင်များတွင်ညစ်ညမ်းပူဆေးလိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပညာစာအုပ်တွေ, စာတမ်းများ, ညီလာခံများနှင့်စာတမ်းတစ်စောင်တင်သွင်း၏တစ်ဦးကကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်ကြီးထွားလာခန္ဓာကိုယ်ခေါင်းစဉ်မှမြှုပ်နှံနေကြတယ်။ Next ကိုတနင်္ဂနွေ, တိုရွန်တိုတက္ကသိုလ်က၎င်း၏ဒုတိယမြောက်နှစ်ပတ်လည် Feminist Porn ဆုပေးပွဲအပေါင်းတို့နှင့်တကွကျော်ကနေဦးဆောင်ပညာရှင်များ, ယဉ်ကျေးမှုဝေဖန်သူများ, တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ, အဆိုတော်များနှင့်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်အတူ stacked ပါလိမ့်မည်သည့်ညီလာခံ, အိမ်ရှင်အဖြစ်။ တစ်ဦးကမီးမောင်းထိုးပြခဲ့ကြရာသူမ၏ Feminist Porn ဆုပေးပွဲ, များအတွက်ကောင်းမွန်သော၏ Gala အခမ်းအနားဖြစ်လိမ့်မည် "ရှစ် sexy နှစ်ပေါင်းအမျိုးသမီး smut ကျင်းပ။ "
အဘယ်ကြောင့်ညစ်ညမ်းလေ့လာမှုများ? အဘယ်ကြောင့်ယခု? Porn လေ့လာရေး၏အယ်ဒီတာများပုံမှန် academese အတွက်ရှင်းပြအဖြစ်: အဆိုပါလယ်ကို "မီဒီယာ, ကျား, မ, လိင်နှင့်နည်းပညာန်းကျင်အငြင်းပွားစရာများ၏ဗဟိုမှာညစ်ညမ်း၏ဆက်လက်အနေအထားပေးထားသစ်တစ်ခုအရေးတကြီးနှင့်အရေးပါမှုအပေါ်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်း, သူတို့ရဲ့ပြန့်ပွားသူတို့၏ပုံရိပ်, သူတို့ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်နဲ့သူတို့ရဲ့စားသုံးမှုအစဉ်အမြဲမြင့်မားပရိုဖိုင်းကိုအများရှိသော်လည်း, အတိတ်ဆယ်စုနှစ်သို့မဟုတ်ဒါထဲမှာညစ်ညမ်းစိတ်ဝင်စားကြောင်းအဆစိုက်ပျိုးထားပါတယ် - ။ အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောနှစ်မျိုးစလုံးကိုညစ်ညမ်းရဲ့ဆိုးကျိုးများအကြောင်းကိုတောင်းဆိုမှုများအတွက် concomitant တိုးနှင့်အတူ "
ဒါ့အပြင်ညစ်ညမ်းတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျပညာရှင်များအတွက်ထွန်းလင်းချင်လျှင်, သင်အသစ်ကမြေပြင်ကိုချိုးဖျက်ဖို့ရှိသည်။ (ဥပမာအားဖြင့်, Concordia ရဲ့ Evangelos Tziallas, Porn လေ့လာရေး၏အယ်ဒီတာ့အာဘော်ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်သူသည်တစ်ဦးကိုတက်-and နေရဆဲ, အဖြစ်လူသိများသည့်ထိတ်လန့်ခွဲအမျိုးအစားတစ်ခုကျွမ်းကျင်သူက "ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း porn ။ ")
သို့သော်လည်းငါသည်သင်တို့မပြောနားမထောင်နိုငျသညျ, စောင့်ပါ။ porn ဆန့်ကျင်အမျိုးသမီးရေးဝါဒီများဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လော
ကောင်းပြီ, သူတို့ထဲကအတော်များများဖြစ်လေ့ရှိတယ်။ လိုလားတဲ့ porn နဲ့ anti-porn အမျိုးသမီးရေးဝါဒီများအကြားစစ်တိုက်ရာတွင်အမျိုးသမီးတိုက်ပွဲသူ့ဟာသူသကဲ့သို့အဟောင်းဖြစ်ပါတယ်။ (ပါမောက္ခ Noble "အကြောက်လွန်ရောဂါ" ကိုခေါ်) ကိုဆန့်ကျင်ညစ်ညမ်းအဖွဲ့ခွဲညစ်ညမ်းသည်အလိုအလျောက်ဖိနှိပ်နှင့်စော်ကားသောကယုံကြည်သည်။ ဒါပေမယ့်လိုလားသူ porn အဖွဲ့ခွဲအဆိုပါ Ascend ယခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ (ကလိင်တူချစ်သူများကထုတ်လုပ်မယ့်အထူးသဖြင့်လျှင်) porn ပင်အားပေးနိုင်ပါသည်ယုံကြည်သည်။
"ကျွန်မပထမဦးဆုံးအညစ်ညမ်းဆုံးမဩဝါဒ ပေး. နှင့်သုတေသနစတင်တဲ့အခါ, porn အားပေးနိုင်ကြောင်းရှိမရှိ၏မေးခွန်းကိုလေထုထဲတွင်ထရမျးခဲ့," ရေဗက္ကာလီဗန်, Calgary တက္ကသိုလ်မှကျားသုတေသနများအတွက်အင်စတီကျု၏ညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ်။ (သူမ ... ဖြစ်ပါတယ် ကိုးကား တက္ကသိုလ်က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်။ ) "ကျနော်တို့ကဘယ်နေရာမှာဦးဆောင်လမ်းပြများနှင့်အစားသဘောတူညီခကျြ, ယဉ်ကျေးမှုအလုပ်သမား, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနိုင်ငံသားမဟုတ်သောစံတန်ဖိုးအလိုဆန္ဒနှင့်အပျြောအပါးများနှင့်စစ်မှန်စွမ်းဆောင်မှုများကဲ့သို့ကိစ္စများအကြောင်းပြောဆိုသော Anti-porn / လိုလားသူအငြင်းပွားမှုများကျော်လွန်ပြီးသွားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ "
ဝမ်းနည်းစရာပါ (ဘာသာရပ်ထည့်သွင်းစဉ်းစား), ညစ်ညမ်း၏ပညာရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးအလွန်မှိုင်းဖြစ်ကြသည်။ ပြည်သူ့ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနဲ့တူခေါင်းစဉ်ကတိပေးနေသော်လည်း: အဆိုပါတရုတ်အင်တာနက်တွင်လိင်နှင့်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် Porn စွမ်းဆောင်ရည်မှတဆင့်ကျားရှာဖွေခြင်း, Porn လေ့လာရေးအတွက်စာစီစာကုံးနီးပါးပိတ်ဆီးနေသောဖြစ်ကြသည်။ Derrida နှင့် Foucault မှကိုးကား "performance", "deconstruct လုပ်ရန်" နှင့် "ဟောပြောချက်နဲ့တူဝေါဟာရများနှင့်အတူတာဝန်ရှိပါတယ်။ " အဘယ်သူမျှမကအခြားအကြောင်းပြချက်များအတွက်, porn လေ့လာမှုများဘာသာစကားကိုဆန့်ကျင်တဲ့ရာဇဝတ်မှုအဖြစ်ပိတ်ပင်ခဲ့ရပါမည်ဆိုပါက။
ကံကောင်းထောက်မစွာ, အပညာသင်နှစ် porn circuit ကိုအပေါ်အကြီးမားဆုံးကြယ်ပွပညာရှင်တွေမရှိကြပေ။ သူတို့ကတစ်ဦးစီ၏အနုပညာရှင်များ, ပါပဲ။ တဦးတည်းထရစ်စ Taormino က, ဂန္အပါအဝင် Self-အကူအညီနဲ့ဗီဒီယိုများနံပါတ်အတွက်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဖျော်ဖြေခဲ့သူအနက်ရောင်ပလပ်စတစ်မျက်မှန်အတွက်ဆွဲဆောင်မှုမိန်းမတယောက်သည် အမြိုးသမီးမြားအဘို့အစအိုလိင်မှအဆုံးစွန်လမ်းညွှန်။ သူမသည်လာမယ့်သီတင်းပတ်ရဲ့ညီလာခံမှာပါလိမ့်မယ်။ "queer porn icon" အဖြစ်ဖော်ပြခံရပြီးကျားမ - ကြားနေမှုနာမ်စား "သူတို့" လို့ဖော်ပြထားတဲ့ Courtney Trouble လည်းအလားတူပင်။ Trouble ရဲ့ hits ၏ string ကိုတူသောခေါင်းစဉ်များပါဝင်သည် ဖြတ်ကျော်အမျိုးသမီးမြေအောက်: တော်လှန်ရေး Porn စတိုင်အခုတော့။ စံသတ်မှတ်ချက်မဟုတ်သောအလောင်းများဟုလူသိများသောအရာများအသုံးပြုခြင်းအတွက်အခက်အခဲများကိုကျော်လွှားသည်။ Trouble ၏ရုပ်ရှင်များတွင်နို့သီးခေါင်းပေါက်များနှင့်ကရိယာများပါသောအဆီများသောအမျိုးသမီးများပါ ၀ င်သည်။ မစ္စ Taormino နှင့် Ms Trouble နှစ် ဦး စလုံးသည်လိမ္မာပါးနပ်သောစွန့် ဦး တီထွင်သူများဖြစ်သည်။ ၀ ဘ်ဆိုဒ်များတွင်ကျင့်ဝတ်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသောထုတ်ကုန်များဖြင့်ပြည့်နှက်နေပြီးခရက်ဒစ်ကဒ်ပြားရှိသူမည်သူမဆိုနေရာတွင်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။
အားလုံးကတော့သော်လည်း, ဆင်စွယ်မျှော်စင်အတွက် jolly ဖြစ်ပါတယ်။ ပါမောက္ခ Noble တစ်စုံတစ်ဦးက porn အပေါ်တစ်ဦးလူတန်းစားသင်ပေးဖို့လိုလားသည့်အခါသူ neoliberal ပညာသင်နှစ်-ကော်ပိုရိတ်ရှုပ်ထွေးခေါ်ဆိုသောအရာကိုအတွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ awfully skittish ဖြစ်နိုင်သည်ကိုရေးသားခဲ့သည်။ (သူ Oblique ထောက်ပြကဲ့သို့) သူတို့ဖြစ်ကောင်းပြီးသားအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ဘိုးဘေးဘီဘင်အစဉ်အဆက်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါင်းစပ်ထက်ပိုပြီးညစ်ပတ်လိင်ကိုမြင်ရပါတယ်သော်လည်း, ကျောင်းသားများထိခိုက်သို့မဟုတ်ပင်ပစ္စည်းအားဖြင့်စိတ်ဒဏ်ရာစေခြင်းငှါမိုကြောက်လန့်ဘာသာရပ်အတွက်ပညာမတတ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ။
porn လေ့လာမှုများအဘို့အလားအလာအမှန်ပင်ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ပါသည်။ ပညာရှင်များမိမိတို့၏လမ်း get လျှင်, ငါတို့သည်ထိုသို့ဆက်ကပ်အပ်နှံတစ်ခုလုံးကိုစင်တာများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ၏မျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ဖြစ်ကောင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ skittish ဖြစ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, မိဘများထွက်ရှာနှင့်သူတို့အပေါ်ကျူရှင်ပိုက်ဆံဖြုန်းနေတဲ့ဘာငရဲတွေးမိပါလိမ့်မယ်။ ပညာမတတ်အလှူရှင်များဖြစ်စေ, လွန်းပျော်ရွှင်မဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ဒါမှမဟုတ်မီဒီယာအပေါ်င့်အရာကိုအာရုံကိုဆွဲနှင့်ပညာမတတ်အများပြည်သူနှိုးဆော်ပေလိမ့်မည်။
ကျွန်တော်ဖြစ်ကောင်းစအိုလိင်ဆက်ဆံနှင့်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု porn အပေါ်ဖတ်လို့မရအောင်ပညာသင်နှစ်ဟောပြောချက်များရှင်သန်လိမ့်မယ်ကိုသိအဖြစ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ, ငါသည်လူ့ယဉ်ကျေးမှုထင်ပါတယ်။ ငါသည်ဤ Self-အလိုလိုကျလှနျးခွငျးအမှိုက်သရိုက်အဆင့်မြင့်ပညာရေးအဖြစ်လူသိများသည့်ကိုခံထိုက်သောသူနှင့်အရေးကြီးသောလုပ်ငန်း့ teeny-အလွန်သေးငယ်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတက်စေသည်သတိထားမိပါတယ်။ အဘယျသို့အကြှနျုပျကိုနှောင့်အယှက်လေးနှင့်ညှဉ်းဆဲခြင်းကိုများ၏ပြင်ပြိုကျခြင်း, မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့လူထုအပေါ်တစ်ဦး con အလုပ်ကဘာလဲဆိုတာမှရပ်တန့်ထားရန်ထိပ်တန်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့်ပေးအပ်အေဂျင်စီများပြင်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျောင်းသားများကိုညစ်ပတ်လိင်ဆက်ဆံလူတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့လိုပါလျှင်, ထိုအတိုင်းငါနှင့်အတူအဆင်ပြေပါတယ်။ ရုံသူတို့ကိုသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်ပေါ်မှာကြကုန်အံ့။